Sheekh Yaasiin oo leh: xabad joojin maye ayadoon loo aargudin Abuushanab.
Ahmed-haadi | haadi30@hotmail.com
Waxuu sheegay Sheekh Ahmed Yaasin oo ah hogaamiyiha ruuxiga ee ururka islaamiga ee Al-xamaas: ururkiisa inuusan aqbaleyn cadaadis iyo xabad joojin dambe oo lalagalo ciidamada gumeysiga ee Yahuuda illaa marka hore jawaab laga bixiyo aargoosi ah dilkii Ismaciil Abuu Shanab.
Waxuu sheekhu intaa ku sii lifaaqay Yahuuda haddey dil sameeyso anaguna dil ayaa sameeyneynaa, haddey wax burburiso inana waxbaan burburineynaa, dagaalkana joojin meyno ilaa aan ka helno guul ama shahiidnimo.
Waxaa kaloo uu sheekha tilmaamay ineysan jirin wax lacag ah oo dibada u taalo hogaamiyayaasha ururka Al-xamaas, hadalkaan dambe waxuu jawaab u yahay Mareykanka sheegidiisi inuu xayiraad ku soo rogay lacagaha dibada u taalo hogaamiyaasha ururka Xamaas.
Mareykanka oo dabagal ku hayo 6 urur oo isalaami ah.
Tuhun kagalay inay xiriir la leeyihiin Al-qaacida ayaa waxuu sababay in dawlada Mareykanka dabadhigo ciidamadeeda sirdoonka si ay ugu kuurgalaan dhaqdhaqaaqa iyo waxqabadka urudaas, arinkaasna waxaa carabaabay mas’uuliyin sarsaro oo katirsan maamulka dawlada Mareykanka iyo Yuruba.
Waxuu intaa raaciyay mas’uul ka tirsan ciidanka sirdoonka ee Mareykanka in ujeeda hadda tahay ogaashada qorshayaasha iyo nidaamka ururadaas.
Mas’uul saro oo katirsan dawlada Mareykanka codsadayna inaan magaciisa la baahin ayaa waxuu yiri: Haddii aad xibnaha uruka horay u qaqabatid, waxaad lumini fursad ah inaad heshid macluumaad aad muhiim u ah iyo inaad ogaatid dadka xiriirka laleh.
Waxaan ka sooxigtay Islamonline.net